China Kurapa kwekuvhiya PE inofema inonamira tepi vagadziri uye vanotengesa | ORIENT
1. Silk tepi ine zvakanakira kupfava uye kugadzikana, kunamatira kwakanaka kune ganda uye nyore kubvaruka;
2. Inofema isina-yakarukwa (bepa) tepi ine tensile simba rakanaka uye haisi nyore kutyora;
3. Perforated polyethylene (PE) tepi, nyore kubvarura zvakaenzana, nyore kubvarura, kubvarura mitsara pasina kukanganisa;
Mashoko 100% Cotton
Saizi: 1.25 * 910cm
Pasherufu Hupenyu 3 makore
Chii chinonzi Athletic tepi?
Iwo epasi zvigadzirwa zvekunamatira tepi ndeyokurapa isiri-yakarukwa jira, yekurapa bepa, yakasununguka donje jira, yakajeka donje jira, silika jira, perforated PE firimu uye OPP firimu zvakateedzana zvakaputirwa neyekurapa inopisa inyauka kumanikidza inonamatira kunamatira kana acrylic glue inoumbwa kuumbwa. Inonyanya kushandiswa kugadzirisa infusion catheters kana tsono uye kugadzirisa kupfeka kana uchipfekedza maronda. Inogona zvakare kushandiswa kugadzirisa akasiyana plaster.
4. Iyo yakanyatso gadzirirwa yekurapa acrylic yekumanikidza inonamatira kunamatira ine yakasimba kunamatira, yakanaka yekutanga kubatisisa, kubata yakanamatira uye inorema kunamatira, hapana yakakombama micheto, hapana peeling, yakapfava uye inotsvedzerera peeling, uye hapana kubvaruka kweganda;
5. Multiple maratidziro kusangana akasiyana emakiriniki zvido
Pashure: Compressor nebulizer neEC ISO uye FDA
Zvadaro: INSULIN PEN NEEDLE